Lalao My Adventure Book 2 aterineto. Play maimaim-poana
Lalao My Adventure Book 2 an-tserasera
Mandehana ho voatsoaka
Afa-mandositra ny tokotany
Gravity Falls: Ny Tsiambaratelon'ny shacks
Miafina zavatra Pirate Harena
Zavatra tsy Object Hunt: Chapter 2
Lalao Online Action Games fikatsahana lalao Funny Games Games ho an'ny ankizilahy Games ho an'ny ankizy Puzzle lalao Adventure Collection entana Find zavatra Manan-tsaina On care Efijery kasihina Html5 Android
Eo anoloantsika dia mahafinaritra vaovao lalao My Adventure Boky 2 ny malaza dia manangana orinasa izay vavahadin lalao. Ity no tapany faharoa amin'ilay tantara momba ny zaza Jack, izay tia hamaky boky isan-karazany momba ny niainany sy ny Fairy tontolo. Rehefa niverina avy ny farany traikefa nahafinaritra dia niaina nandritra ny taona maro fa tony. Fa indray alina, dia iray ihany ny fotoana dia naniraka azy ho amin'izao tontolo izao ny Moyen Âge. Ny mahery fo tao amin'ny mifono mistery lakaly ao anati-rova. Avy amin'ny iray amin'ireo tilikambo namerina ny antso vonjy. Mazava ho azy, ny mahery fo ambony nanapa-kevitra ny hanampy ny feo tsy fantatra. Ary manana fomba alalan'ny Misafotofoto sy lalantsara ny fahiny trano feno fandrika isan-karazany sy ny piozila. Afaka manampy anao amin'ny toetra amam-panahy eto amin'ity traikefa nahafinaritra. Hamaha Puzzles sy saro-pantarina, mahita zavatra mba hanampy anao izany, ary mahazo ny farany toerana. Rehefa dinihina tokoa, dia hamonjy ny fiainana sy ny olona iray taty aoriana afaka hiverina any an-tranony. Fanaraha-maso ny lalao dia tsotra, ary dia nentina nivoaka ny totozy. Game Ny Adventure Boky 2 an'ny sokajy ny lojika lalao. Izany dia mikendry ny fampandrosoana ny sain'ny sy ny faharanitan-tsaina ny mpilalao. Miaraka amin 'ny kanto - voatsoaka sary ny mety arahina mozika, ary koa ny sarotra tetika, dia tsy hiala tsy niraika mpilalao iray izay tia milalao karazana kilalao ity. Haingana Download Ny Adventure Boky 2 eo amin'ny mikasika finday, takela-kazo na ny solosaina sy ny mitsoraka ao amin'ny zava-miafina saro-pantarina rivo-piainana sy ny zava-miafina ny zava-miafina izay hanampy anao mahaliana ny mandany ny fotoana malalaka. Raha tianao dia afaka hilalao ny Adventure Boky 2 mivantana amin'ny Internet. Izany no hanome anao ny fahafahana manasa ny namany ho amin'ny lalao, ary koa ny manara-maso ny fahombiazan'ny mpilalao hafa.